Nhau: Mhando uye Maitiro Avanogona Kukubatsira Kuti Ugare Zvakanaka - Kuzvibatsira Zviwanikwa | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Chinangwa chekutaura ngano ndechekuburitsa nyaya, chokwadi kana madingindira anogona kushanda sekubatana pakati petsika dzakasiyana. Saizvozvo, kutaura nyaya kwave kuripo nguva refu kunyora pachako kusati kwagadzirwa. Mufananidzo wemuridzi wengoma, muEuropean medieval, ndiwo murondedzero wenyaya wega. Panguva iyo vanhu vashoma kwazvo vakadzidza kuverenga, chimiro chemuridzi wembira ndiyo chete nzira yekuita kuti vagari vemumaguta ese vazive.
Varidzi vemimhanzi vakapfuura nemumataundi vachirondedzera nyaya dzavo, nenziyo, mimhanzi uye nemasaini akadai. Vakataurira vamwe pamusoro pezviitiko, hondo, uye zviitiko zvakange zvaitika kuvaraidza vamwe vanhu. Nenzira yekuratidza, ivo vakwezva kutariswa kwevagari vemataundi nekutaura idzo nyaya dzaimbove dzechokwadi dzimwe nguva, asi havana kumira kuviga zvidiki zvigadzirwa zvakaita kuti rondedzero yacho inakidze.
Vanoti nyaya yakanaka inogara iine chinhu chaicho, chimwe chinhu chakavanzwa pakati pemitsara nendima, chinhu chechokwadi chinova musimboti wenyaya yacho. Kunyangwe iri nhoroondo yekunyepedzera, kana nyaya yechokwadi. Mune rondedzero mune nyaya dzisingaverengeke dzinotaura chokwadi, zviroto chaizvo, nyaya dzine magumo anofadza kana nemameseji ayo neimwe nzira anochinja maonero ako pahupenyu.
Kuverenga nyaya kunonakidza, nekuti nyaya dzinowanzo kuve pfupi, dzinovaraidza, uye dziri nyore kubata. Kunyangwe kune avo priori havanzwe sekuverenga mafeni. Kana iwe ukarova nyaya yakakwana, iyo inosanganisira izvo zvinhu zvauri kutsvaga pane imwe nguva, iwe pasina mubvunzo unonzwa wakasungwa mune pfupi kuverenga, iyo neimwe nzira inozochinja maonero ako ehupenyu.
Kune nyaya dzakawanda sekunge paine vanhu, nekuti munhu wese ane chekutaura. Chero ani zvake anogona kurondedzera nguva dzakararama, zviitiko zvehupenyu izvo zvinogona kuvhundutsa vamwe vanhu. Nyaya dzerudo dzinogona kuita kuti utende kuti kune akakwana munhu kwauri, iye munhu anokuzadzisa iwe anogona kunge akamirira chero kupi. Aya mamiriro anoitika zuva rega rega mumakona mazhinji epasi. Uye, nekuda kwenyaya dzinonyorwa nevanhu kuti vaparadzire nyaya yavo, tese tinogona kutenda muhukama hune shungu idzo dzimwe nguva dzinoita sedzisiri dzechokwadi, asi kwete nguva dzose.
Asi munhu haasi kungosimbiswa nerudo, muhupenyu, kune nyaya dzisingaverengeke dzinoda kuziva, kunyange dzinokanganisa, dzimwe nguva dzinotyisa. Zvimwe unoda kuverenga nezve nyaya dzekukunda, dzekuzvipira kunewe, kwekurudziro izvo zvinokubatsira iwe kuwana nzira panguva apo iwe unozviwana iwe uchitenderera iyo imwechete nzira kakawanda. Nekuti kusaziva kunoita kuti isu tirege, nekuti hapana imwe nzira iri nani yekunzwa kugona kuita chinhu pane kuziva kuti vamwe vanhu vakwanisa kuzviita.
Iyo nyaya inogona kuve yechokwadi kana inogona kuve yechokwadi, uye, kana iri nyaya yakanaka, ichave iine chimwe chinhu chechokwadi, pasina mubvunzo ichakupa iwe zvakakosha zvidzidzo zvehupenyu. Uye nekuda kwechikonzero ichi, muchikamu cheNhau ichi iwe unowana kuverengwa pamhando dzese dzenyaya, dzimwe chaidzo, dzimwe dzekunyepedzera, dzimwe dzinoiswa senge ngano dzemumaguta, asi, mune chero mamiriro ezvinhu, nyaya dzinovhundutsa.
Pamwe kunyange, kushamisika pachako kunyora nyaya iyoyo kuti iwe pachako wakamborarama kana kunzwa. Nekuti chero chiitiko chingazarurire vamwe vanhu, nekuti hauzive kuti hupenyu hwako hungakanganisa nyika Chero nyaya inokodzera kutaurwa, kuverenga, uye kunakidzwa nevamwe.
Zvekuti iwe haufanire kutsvaga zvakajairika pese paunonzwa kuda kushandisa maminetsi mashoma kuverenga nyaya, Muchikamu chino chinonzi Nyaya, uchawana nyaya dzekunakidzwa kwemaminetsi mashoma.
Ipfupi nyaya dzerudo dzinozoita kuti utende maari
Nyaya dzerudo dzinogara dzichiita kuti tinzwe zvirinani, dzinoita kuti titende kuti izvo zvinhu zvinogona kunyatsoitika, tinzwe izvo ...
Ted Bundy: a serial killer akazove anozivikanwa
Musi waJanuary 24, 1989 Ted Bundy akaurayiwa muFlorida, asi nanhasi zvichiri kuzivikanwa ...
Idzo dzinonyanya kufarirwa ngano dzakatenderedza pasirese
kubudikidza Manuel inoita 4 makore .
Sezvo ngano dziri chikamu chetsika yemazana kana zviuru zvetsika, pane akasiyana siyana. Pasina…
Iyo inokurudzira nyaya yaBen Carson
Iyi ndiyo nyaya yemukomana wechitema anonzi Ben Carson. Paaive mudiki, mukoma wake, amai vake uye ...
Muenzaniso wesimba rinoshamisa repfungwa: nyaya yaSam Londe
Muchikamu chino iwe uchazoziva iro rechokwadi simba iro pfungwa rine pamusoro pemuviri wedu. Uri kuenda kuziva ...
Pamativi ese maviri epaunda
Pazasi, ini ndinogadzira zvakare tsamba yakaburitswa muXL Semanal magazini. Akave akahwina mumakwikwi anonzi «Iyo ...
Chiito chemutsa wemupurisa ane munhu akaremara anofamba pamasocial network
Nathan Sims aisaziva kuti mumwe munhu aimutora mifananidzo paakagara pachiteshi chemabhazi ...
Rwendo rwandisingade kune chero munhu
Iyi ndiyo nyaya iri mumifananidzo yemamwe erwendo rwakaipa kwazvo muhupenyu. Mukadzi we ...
Nhau Dzakaipa PaAirport Uye Muenzaniso WeMhepo Kubatana
Ndiri kuzokuudza pfupi pfupi anecdote yakaitika munhandare yendege uye inoratidza iyo degree ...
Mupfuuri aifunga kuti uyu murwi wemarara. Handina kumbobvira ndaona shanduko inotyisa
Wanga uchiziva here kuti mhuka dzisina pekugara dzakapetwa kashanu pane vanhu vasina dzimba? Hazvishamise kuona ...
Mumwe murume akawana mwana uyu shiri. Iwe unofanirwa kuona anotevera 36 mazuva ... zvisingaite
Mumwe murume akatumira iyi inoshamisa nyaya paImgur. Izvo ndezvekuti mwana uyu shiri iyo ...